အမြဲတမ်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသလို ခံစားနေရတဲ့အခါ ဒါလေးတွေလုပ်ကြည့်ပါ – Trend.com.mm
အမြဲတမ်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသလို ခံစားနေရတဲ့အခါ ဒါလေးတွေလုပ်ကြည့်ပါ
Posted on July 10, 2018 by Noel
အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ ဟိုနားက နာချင်သလိုလို ဒီနားက ကိုက်ချင်လာသလိုလို ခံစားလာရတတ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ရတဲ့အရာ၊မိုးရွာရွာနေပူပူ သွားလာရတဲ့နေရာတွေ၊လှုပ်ရှားရတာတွေလည်းမရှိပဲ နေ့ရက်တိုင်း ပင်ပန်းနေသလိုခံစားရမယ်။ဒါမှမဟုတ် နေ့တိုင်းကွန်ပျူတာကြည့်ပြီးစာရိုက်နေပေမဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ဘာမှမလုပ်ချင်မကိုင်ချင်ပဲ အိပ်ရာထဲပဲတိုးခွေမိတဲ့နေ့ရက်တွေရောက်နေတာလား?လူကလှုပ်ရှားရတာမပင်ပန်းပေမဲ့ဦးနှောက်နဲ့စဉ်းစားရလို့ စိတ်ပင်ပန်းတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းသက်ရောက်မှုသွားရှိနေပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးနေ့ရက်တိုင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသလို ခံစားနေရတာက သင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက စွမ်းအင်တွေဆုံးရှုံးနေလို့ပါ။ဒီစွမ်းအင်တွေပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက် ပြောင်းလဲမှုအသေးလေးတွေတော့လုပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။သင့်ရဲ့ နေ့ရက်တိုင်းကို တက်ကြွလန်းဆန်းလာအောင်အားဖြည့်ပေးမယ့်အရာလေးတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်
မနက်ခင်းနိုးပြီဆိုတာနဲ့ မျက်နှာသစ်၊သွားတိုက်ပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပြုံးဖို့မမေ့ပါနဲ့။စိတ်ထဲကမပါပဲ ပြုံးရင်တောင် ဒီလိုပြုံးလိုက်တဲ့အတွက် ဦးနှောက်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလှည့်စားလိုက် သလိုဖြစ်ပါတယ်။ရယ်မောတဲ့အခါ စိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်လာသလိုပဲ ပြုံးလိုက်တဲ့အခါမှာလည်း သင့်ဦးနှောက်က သင်ပျော်နေတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်တွင်းကို စွမ်းအင်တွေဖြည့်စွမ်းပေးပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် ပြုံးဖို့မမေ့ပါနဲ့
တစ်ခါတစ်လေအလုပ်နောက်ကျမှာစိုးလို့ ရေမချိုးပဲသွားဖြစ်တဲ့ရက်တွေရှိမယ်။အဲ့ဒီရက်တွေမှာဆို သင့်စိတ်တွေလေးလံထိုင်းမှိုင်းနေတာသတိထားမိခဲ့လား?မနက်စောစောရေမိုးချိုးတာက လူကိုလန်းဆန်းစေသလို စိတ်ကိုပါလန်းဆန်းတက်ကြွသွားစေပါတယ်။တစ်နေကုန်ပင်ပန်းမှုတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဖို့ ဒါတွေက သင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်တွေပါ။
ပင်ပန်းရတဲ့ကြားထဲ ဒါတွေလုပ်ရင်ပင်ပန်းမှာပေါ့လို့မတွေးလိုက်ပါနဲ့။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာဟာ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းမွန်စေတဲ့အတွက်သွေးလေးတာ၊အကြောတက်တာ၊ညောင်းညာတာတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရေမချိုးခင် ၁၅မိနစ်လောက် အကြောလျှော့လေကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
နေ့တိုင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသလိုခံစားနေရတာ အစားအသောက်ကြောင့်လည်းပါပါတယ်။အာဟာရမျှတအောင်စားတဲ့အခါ သွေးလေညီညွတ်လို့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကအဆိပ်အတောက်တွေဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။နေ့တိုင်းအသားဟင်းမစားပဲ အသီးအရွက်တွေ၊အသီးအနှံတွေများများပြောင်းစားကြည့်ပါ။အသားဟင်းနည်းနည်း၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်များများစားပါ။အသားလျှော့စားပြီး အသီးအရွက်များများစားတဲ့အခါ အသားအရည်ကအစ ကြည်လင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပေါ့ပါးလာတာကို
တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြီးသွားလို့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ဖုန်းသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့။စိတ်အပန်းဖြေတာဆိုပေမဲ့လည်း ဖုန်းကြည့်တဲ့အခါအမြင်အာရုံကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။မျက်လုံးညောင်းညာကိုက်ခဲတာတွေမဖြစ်ဖို့ ဖုန်းသုံးတာကိုအရင်ကထက်လျှော့ပြီး စောစောအိပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။အရင်က ၁၂ နာရီမှအိပ်နေကျဆိုရင် ၁၁ နာရီပြောင်းအိပ်ကြည့်ပါ။၁၀နာရီလောက်အိပ်ပြီး မနက် ၆နာရီလောက်ထရင် တစ်နေ့တာအိပ်စက်ချိန် ၈နာရီလုံလောက်နေပါပြီ။သင့်ရဲ့အိပ်ချိန်ကို ၁၀ခွဲလောက်သတ်မှတ်ပြီးအိပ်သင့်ပါတယ်။
ဒီအချက်လေးတွေက သင်သိပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ တကယ်ရော လိုက်လုပ်ဖြစ်ရဲ့လား? သိရုံသိပြီးလိုက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီအကျိုးရလဒ်တွေကိုခံစားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သေးသေးလေးတွေအစပြောင်းလဲမှ အကျိုးရလဒ်ကိုခံစားရမှာပါ။နေ့ရက်တိုင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်သလိုခံစားနေရတယ်ဆိုရင် ဒီလိုပြောင်းလဲမှုသေးသေးလေးတွေက စလုပ်တာအကျိုးအရှိဆုံးပါပဲ 🍀
အသကျအရှယျရလာတာနဲ့အမြှ ဟိုနားက နာခငျြသလိုလို ဒီနားက ကိုကျခငျြလာသလိုလို ခံစားလာရတတျပါတယျ။ဒါ့အပွငျ ပငျပငျပနျးပနျးလုပျရတဲ့အရာ၊မိုးရှာရှာနပေူပူ သှားလာရတဲ့နရောတှေ၊လှုပျရှားရတာတှလေညျးမရှိပဲ နရေ့ကျတိုငျး ပငျပနျးနသေလိုခံစားရမယျ။ဒါမှမဟုတျ နတေို့ငျးကှနျပြူတာကွညျ့ပွီးစာရိုကျနပေမေဲ့ အိမျပွနျရောကျတဲ့အခါ ဘာမှမလုပျခငျြမကိုငျခငျြပဲ အိပျရာထဲပဲတိုးခှမေိတဲ့နရေ့ကျတှရေောကျနတောလား?လူကလှုပျရှားရတာမပငျပနျးပမေဲ့ဦးနှောကျနဲ့စဉျးစားရလို့ စိတျပငျပနျးတဲ့အခါ ခန်ဓာကိုယျမှာလညျးသကျရောကျမှုသှားရှိနပေါတယျ။
ဒီလိုမြိုးနရေ့ကျတိုငျး ပငျပနျးနှမျးနယျနသေလို ခံစားနရေတာက သငျ့ခန်ဓာကိုယျတှငျးက စှမျးအငျတှဆေုံးရှုံးနလေို့ပါ။ဒီစှမျးအငျတှပွေနျလညျရရှိဖို့အတှကျ ပွောငျးလဲမှုအသေးလေးတှတေော့လုပျပေးရပါလိမျ့မယျ။သငျ့ရဲ့ နရေ့ကျတိုငျးကို တကျကွှလနျးဆနျးလာအောငျအားဖွညျ့ပေးမယျ့အရာလေးတှကေ ဘာတှလေဲဆိုတာကွညျ့လိုကျရအောငျ
မနကျခငျးနိုးပွီဆိုတာနဲ့ မကျြနှာသဈ၊သှားတိုကျပေါ့။အဲ့ဒီအခြိနျမှာ ပွုံးဖို့မမပေ့ါနဲ့။စိတျထဲကမပါပဲ ပွုံးရငျတောငျ ဒီလိုပွုံးလိုကျတဲ့အတှကျ ဦးနှောကျရဲ့လုပျဆောငျမှုတှကေိုလှညျ့စားလိုကျ သလိုဖွဈပါတယျ။ရယျမောတဲ့အခါ စိတျထဲမှာပြျောရှငျလာသလိုပဲ ပွုံးလိုကျတဲ့အခါမှာလညျး သငျ့ဦးနှောကျက သငျပြျောနတေယျလို့သတျမှတျပွီးခန်ဓာကိုယျတှငျးကို စှမျးအငျတှဖွေညျ့စှမျးပေးပါတယျ။အဲ့ဒါကွောငျ့ ပွုံးဖို့မမပေ့ါနဲ့
တဈခါတဈလအေလုပျနောကျကမြှာစိုးလို့ ရမေခြိုးပဲသှားဖွဈတဲ့ရကျတှရှေိမယျ။အဲ့ဒီရကျတှမှောဆို သငျ့စိတျတှလေေးလံထိုငျးမှိုငျးနတောသတိထားမိခဲ့လား?မနကျစောစောရမေိုးခြိုးတာက လူကိုလနျးဆနျးစသေလို စိတျကိုပါလနျးဆနျးတကျကွှသှားစပေါတယျ။တဈနကေုနျပငျပနျးမှုတှကေို ကွံ့ကွံ့ခံနိုငျဖို့ ဒါတှကေ သငျပွငျဆငျရမယျ့အခကျြတှပေါ။
ပငျပနျးရတဲ့ကွားထဲ ဒါတှလေုပျရငျပငျပနျးမှာပေါ့လို့မတှေးလိုကျပါနဲ့။လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာဟာ သှေးလညျပတျမှုကောငျးမှနျစတေဲ့အတှကျသှေးလေးတာ၊အကွောတကျတာ၊ညောငျးညာတာတှမေဖွဈအောငျကာကှယျပေးပါတယျ။အဲ့ဒါကွောငျ့ရမေခြိုးခငျ ၁၅မိနဈလောကျ အကွောလြှော့လကေငျြ့ခနျးလေးတှလေုပျပေးသငျ့ပါတယျ။
နတေို့ငျးပငျပနျးနှမျးနယျနသေလိုခံစားနရေတာ အစားအသောကျကွောငျ့လညျးပါပါတယျ။အာဟာရမြှတအောငျစားတဲ့အခါ သှေးလညေီညှတျလို့ခန်ဓာကိုယျတှငျးကအဆိပျအတောကျတှဖေယျရှားပေးနိုငျပါတယျ။နတေို့ငျးအသားဟငျးမစားပဲ အသီးအရှကျတှေ၊အသီးအနှံတှမြေားမြားပွောငျးစားကွညျ့ပါ။အသားဟငျးနညျးနညျး၊ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားမြားစားပါ။အသားလြှော့စားပွီး အသီးအရှကျမြားမြားစားတဲ့အခါ အသားအရညျကအစ ကွညျလငျပွီး ခန်ဓာကိုယျမှာလညျးပေါ့ပါးလာတာကို
တဈနတေ့ာလုပျငနျးဆောငျတာပွီးသှားလို့အိမျပွနျရောကျတဲ့အခါ ဖုနျးသုံးစှဲမှုကိုလြှော့ဖို့လညျးမမပေ့ါနဲ့။စိတျအပနျးဖွတောဆိုပမေဲ့လညျး ဖုနျးကွညျ့တဲ့အခါအမွငျအာရုံကို ထိခိုကျနိုငျပါတယျ။မကျြလုံးညောငျးညာကိုကျခဲတာတှမေဖွဈဖို့ ဖုနျးသုံးတာကိုအရငျကထကျလြှော့ပွီး စောစောအိပျဖို့မမပေ့ါနဲ့။အရငျက ၁၂ နာရီမှအိပျနကေဆြိုရငျ ၁၁ နာရီပွောငျးအိပျကွညျ့ပါ။၁ဝနာရီလောကျအိပျပွီး မနကျ ၆နာရီလောကျထရငျ တဈနတေ့ာအိပျစကျခြိနျ ၈နာရီလုံလောကျနပေါပွီ။သငျ့ရဲ့အိပျခြိနျကို ၁ဝခှဲလောကျသတျမှတျပွီးအိပျသငျ့ပါတယျ။
ဒီအခကျြလေးတှကေ သငျသိပွီးသားဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ဒါပမေဲ့ တကယျရော လိုကျလုပျဖွဈရဲ့လား? သိရုံသိပွီးလိုကျမလုပျဘူးဆိုရငျတော့ ဒီအကြိုးရလဒျတှကေိုခံစားရမှာမဟုတျပါဘူး။ သေးသေးလေးတှအေစပွောငျးလဲမှ အကြိုးရလဒျကိုခံစားရမှာပါ။နရေ့ကျတိုငျးပငျပနျးနှမျးနယျသလိုခံစားနရေတယျဆိုရငျ ဒီလိုပွောငျးလဲမှုသေးသေးလေးတှကေ စလုပျတာအကြိုးအရှိဆုံးပါပဲ
Won Bin ကို ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ၈နှစ်နီးပါးလောက် မတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းက…
မေမေရဲ့လက်ပေါ်မှာ အိပ်လျက်ပါလာတဲ့ မင်းသားလေးလူးဝစ် ခရစ်ယာန်ကျောင်းသို့ ရောက်ရှိ